Azonao atao ny mandre an'i Buzz Aldrin ho toy ny iray tamin'ireo lehilahy izay nandia ny Lalao voalohany tamin'ny 1969 ary mandehandeha manerana ny firenena amin'izao fotoana izao mampiseho ny t-shirt mirehitra manentana ny olona hiditra ao amin'ny Mars. Ny lehilahy eo ambanin'ny t-shirt dia iray amin'ireo mpandihy an-dranomasina fanta-daza indrindra any Amerika, ary olona marevaka sy mihetsika izay manohy mametraka rakitsoratra amin'ny fiainana. Mpisolovava matanjaka ho an'ny misiona any Mars izy ary mandeha any amin'ny firenena miresaka momba ny fizahan-tany amin'ny teny mahery.
Ny tombotsoany amin'ny fijerena ny planeta mena dia maneho ny fihetseham-pony noho ny fijeriny ny fandrosoana mankany amin'ny sisintany vaovao izay nanampiany tamin'ny fiandohan'ny taona 1960.
Buzz Aldrin dia teraka Edwin Eugene Aldrin, Jr. tamin'ny 20 Janoary 1930 tany Montclair, New Jersey. Ny anaram-bosotra "Buzz" dia nitranga rehefa nanonona ny rahalahy ho toy ny mpilalao ny anabaviny , ary lasa "Buzz" fotsiny izy. Na dia izany aza dia tsy tamin'ny 1988 akory raha nanova ny anarany ho an'i Buzz i Aldrin.
Taorian'ny nahazoany mari-pahaizana tao amin'ny Sekoly Ambony tao Montclair, dia nanohy ny asan'ny tafika amerikana any West Point i Aldrin. Nahazo diplaoma fahatelo tao amin'ny kilasiny izy ary nahazo mari-pahaizana licence momba ny engineering.
Taorian'ny nahazoany diplaoma, dia notendrena ho lefitra faharoa ao amin'ny Air Force Amerikana i Aldrin, ary niasa toy ny mpanamory fiaramanidina nandritra ny ady Koreana . Nandeha fiaramanidina 66 miady amin'ny sabatra F-86 izy, ary voatery nitifitra fiaramanidina roa farafahakeliny.
Taorian'ny ady dia nijanona tao amin'ny Nellis Air Force Base i Aldrin ho toy ny mpitaingin-tsoavaly avy any avaratra, ary avy eo dia nanohy ny fanampiana ho an'ny dean ny fahaiza-manao tao amin'ny Akademia Air Force Amerikana nandritra ny taona vitsivitsy.
Lasa mpitari-bato amin'ny seranam-piaramanidina ao Bitburg Air Base tany Alemaina izy taorian'izay, nidina nanafotra an'i F-100 Super Sabers izy, niverina tany Etazonia i Aldrin mba hanohy ny fianarana amin'ny astronautika avy amin'ny MIT. Ny fizotrany dia nomena loharanom -baom-baovaon-tsindrim-peo ho an'ny orinasa voatokana ho an'ny orbitra.
Fiainana toy ny astronaut
Taorian'ny fianarana ambaratonga faharoa dia nandeha niasa tao amin'ny Diviziona Air Force Space Systems any LA izy, talohan'ny nifaranany tao amin'ny Sekoly Pilotan'ny Tafika an-tampon'ny tafika amerikana tao amin'ny Edwards Air Force Base (na dia tsy pilotan'ny test aza izy).
Fotoana fohy taorian'izay, dia nanaiky azy i NASA ho mpilatsaka an-tsehatra, izay voalohany nanana doctorat. Izany dia nahazo ny anaram-bosotra hoe "Dr. Rendezvous," ho fanamarihana ny teknikan-dry zareo izay nahatonga azy ho lasa fanakianana amin'ny hoavin'ny fitrandrahana habaka.
Talohan'ny hahafahany nandeha tany an-toerana, Aldrin (tahaka ireo mpanamory hafa rehetra) dia tsy maintsy niasa tamin'ny sehatra samihafa nanohana ny asa fitoriana hafa ary nianatra momba ireo teknolojia vaovao napetrak'izy ireo sy ny mpiara-miasa aminy. Tao amin'io anjara andraikitra io, dia lasa mpikambana tao amin'ny ekipa mpanamory izy ho an'ny iraka Gemini 9 . Nanao fanatanjahantena ho an'ny capsule ihany koa izy mba handefa rafitra miaraka amin'ny fandrindrana an-habakabaka, taorian'ny tsy nahombiazan'ny fiatoana tany am-piandohana tamin'ny fiara mpitatitra.
Taorian'ity fahombiazana ity, nomena ny baikon'ny iraka Gemini 12 ny Aldrin. Zava-dehibe tokoa io iraka io, satria io no farany tao amin'ilay andian-dahatsoratra. Natao ho fitsapana fitsapana ho an'ny Tetik'asa Extra-Vehicular (EVA). Nandritra ny sidina dia nametraka ny rakitra lavareny ho an'ny EVA (5.5 ora) i Aldrin, ary nanaporofo fa afaka miasa tsara ireo piraty ireo ivelan'ny sambo.
Tsy hanidina misiona iray hafa i Aldrin mandra-pahatongan'ny iraka nomena anarana Apollo 11 ho any amin'ny volana . (Izy no niasa ho modely ho an'ny modely ho an'ny Apollo 8.
) Satria izy no mpanamory baomba modely ho an'i Apollo 11 , dia samy nihevitra ny rehetra fa izy no olona voalohany hiditra amin'ny Lalao. Na izany aza, misy zavatra azo tsapain-kevitra kokoa izay mety ho voalohany hivoaka sy hanao ny honohono: ahoana no nametrahana ireo mpanamory sambondanitra tao anatin'ilay modely. Aldrin dia tsy maintsy mibaribary ny rivodoza Neil Armstrong mpiara-dia aminy mba hahatongavana any. Noho izany dia niasa i Aldrin ka nanaraka an'i Armstrong hatramin'ny 20 Jolay 1969. Raha inonona imbetsaka izy dia ekipa matihanina, ary i Neil, izay mpikambana ao amin'ny ekipa, dia mety ny manao izany voalohany dingana.
Fiainana aorian'ny filentehan'ny volana
Niverina avy tao amin'ny Moon ireo mpanamory sambon-danitra taorian'ny nijanonana tao anatin'ny 21 ora, nitondra vatolampy volana 46. Nomena ny medaly filoham-pirenena an'ny Fahalalahana i Aldrin, ilay fanomezam-boninahitra ambony indrindra nomena nandritra ny fotoam-pialan-tsasatra.
Nahazo loka sy medaly avy amin'ny firenena 23 hafa ihany koa izy. Niala tao amin'ny Air Force izy tamin'ny taona 1972 taorian'ny 21 taona nanompoany tamim-pahatokiana ary nisintaka tamin'ny NASA ihany koa. Na dia teo aza ny zava-manahirana manokana sy ny fitsaboana amin'ny fahaketrahana ara-pahasalamana sy ny fisotroan-dronono, dia nanohy nanome fanazavana sy fahaizana momba ny masoivoho i Aldrin. Ao anatin'ireo fandraisany manan-danja dia ny soso-kevitra amin'ny fanofana mpanamory fiarandalamby eny ambanin'ny rano mba hanatsarana kokoa ny fepetran'ny toerana. Izy koa dia niasa tamin'ny famolavolana lalan-tsisintany teo anelanelan'ny Tany sy Mars izay ahafahan'ny fiaramanidina mandeha amin'ny arabe mandalo.
Tamin'ny taona 1993, Aldrin dia namolavola drafitra ho an'ny toeram-ponenana maharitra. Izy koa no mpanorina ny orinasa mpanamboatra rocket antsoina hoe Starcraft Boosters, Inc., ary koa ShareSpace tsy maka tombombarotra, izay natokana hanao fizahan-tany malalaka ho an'ny olona rehetra. Dr. Aldrin koa dia namoaka boky maromaro. Tao amin'ny hakiviana mahafinaritra, nitantara ny fiainany izy, anisan'izany ny iraka nampanaovina an'i Apollo , ny fiposahan'ny Moon sy ny tolona manokana nataony. Tamin'ny taona 2016, nanoratra ilay boky hoe Mission to Mars izy: Ny Vision for Exploration Espace, miaraka amin'ny mpanoratra siantifika Leonard David. Ao anatin'izany, miresaka momba ny asa fitoriana ataon'ny olombelona amin'ny Planeta mena sy any ivelany izy.
Ny 9 septambra 2002, i Aldrin dia nanatrika teo ivelan'ny trano fandraisam-bahiny Kalifornia, mpilalao sarimihetsika Bart Sibrel. Mr. Sibrel dia mpanohana mafy ny teoria fa ny fandaharam-potoanan'i Apollo, sy ny fipetrahan'ny volana eo amin'ny volana, dia fahadalana . Nantsoin'i Mr. Sibrel ho "kanosa, mpandainga, ary mpangalatra" i Aldrin. Tsy mahagaga raha tsy nankasitraka ny fanehoan-kevitra i Dr. Aldrin ary nanindrona an'i Mr. Sibrel teo amin'ny tarehiny.
Ny mpampanoa lalàna ao an-toerana dia nandà tsy hampiato ny fiampangana.
Na any amin'ny 80 taona aza, Dr. Aldrin dia manohy mikaroka ny tanintsika amin'ny alàlan'ny fitsidihana any Antarctica sy amin'ny toerana lavitra. Tamin'ny volana aprily 2017, nomem-boninahitra izy ho ilay mpanamory sambon-danitra tranainy indrindra hiara-mandeha amin'ny Air Force Thunderbirds. Nipoitra tamin'ny fisehoan-javatra toy izany tsy misy toerana izy io toy ny "Dancing with the Stars" sy ny lalaon'ny New York Fashion Week tamin'ny taona 2017, izay mampiseho mason-tsivana ho an'ny lehilahy.
Inona no Neil sy Buzz sisa tavela tamin'ny Volana?
Ny biography of John Dee
Ny tantaran'i Sonara
Faravahar - Zana-baolina Zoroastrianisma
Trangan-javatra haingana nataon'ny Filoha Harry Truman
Nahoana no mamony be ny Krismasy?
Ny rivo-doza nalefa any an-trano
Manafina Ny Feon'ny Olona ve ny Bugs?
Fampidirana ny Class Echinoidea
Ny Takelaka Cue Of George Balabushka
Tetikasa A & M momba ny fandraharahana momba ny varotra Texas
Ny lahatenin'i Elie Wiesel ho an'ireo sosaiety holocaust
Laos | Facts and History
Fandeferana amin'ny familiana rehefa mety amin'ny Chip-and-Run
Ny famonoana ny fanarabiana: Fanontaniana momba ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny Club
Nitsangana tamin'ny maty ny olona tao amin'ny Baiboly
Asa ara-tsosialy na torohevitra? Didy inona no tokony hofidiako?
Ny famaritana ny Bruin
Drafitry ny lesoka madinika
Daty manokana ho an'ny Andro Arafat nanomboka tamin'ny 2017 hatramin'ny 2025
Izay rehetra tianao ho fantatra momba ny Revolisiona Maitso